Kismaayo News » Gen. Subagle oo Afmadow ka subagaysanaya
Gen. Subagle oo Afmadow ka subagaysanaya
Kn: Taliyaha guud ee ciidamada AMISON, Gen. Cismaan Nuur Subagle iyo wafti uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Afmadow oo lagu diyaariyay ciidamadii Shabaabka ka xorayn lahaa degmooyinka Xagar iyo Bu’aale, halka kuwa loogu talo galay inay qabtaan Jamaame iyo Jilib lagu diyaariyay deegaanka Buulaguduud oo qiyaastii 30km Kismaayo kaga began dhinaca Waqooyi.
Waftiga Gen. Subagle waxaa Afmadow ku soo dhaweeyay saraakiisha ugu saraysa ciidamada AMISON ee ku sugan degmada iyo saraakiisha daraawiishta iyo nabadsugidda ee dawlad gobolleedka Jubbaland ee degmada Afmadow.
Taliyaha amniga ee degmada Afmadow, Aar Sh. Cali oo soo dhawayntii kadib wafuudda kala hadlay doorka wada shaqaynta iyo iska kaashiga dhinaca amniga ayaa AMISON uga mahadceliyay kaalinta ay ka qaadanayaan xasilinta iyo nabad ku soo dabaalka guud ahaan Jubbaland, gaar ahaanna degmada Afmadow.
Gen. Subagle ayaa shacabka Afmadow, masuuliyiinta iyo ciidanka Jubbaland uga mahadceliyay soo dhawaynta diiran ee at u sameeyeen asaga iyo waftida uu hogaaminayay, wuxuuna intaasi ku daray inay farxad u tahay inuu soo booqdo magaalo uu magaceeda inbadan maqlay, maankana ku hayay inuu mar tago. Wuxuu sheegay in walow uu dal kale matalayo, hadana ay u tahay inuu magaaladiisii iyo dadkiisii u yimid.
Magaalada Afmadow ayaa waxaa ka socda diyaargarow ciidan kii ugu lixaad badnaa tan iyo intii Shabaabka laga xoreeyay degmadaasi, waxaana la saadaalinayaa in xili aan fogayn ay ciidamadani furimaha dagaalka u dhaqaajin doonaan.
Ugu danbayntii, degmada Afmadow oo caan ku ah subagga ayaa Gen. Subagle uu ka subugaysanayaa.